Akukho muntu ozophucwa umuzi wakhe - EFF | News24
Akukho muntu ozophucwa umuzi wakhe - EFF
Cape Town – "Akekho umuntu ozophucwa umuzi wakhe. Akekho umuntu ozolahlekelwa yiflethi lakhe noma ifemu yakhe."
Lawa ngamazwi ashiwo ngumholi we-EFF uJulius Malema ekhuluma ngaphandle kwesiShayamthetho sikazwelonke, ngemuva kokuthi iPhalamende livumelane ngesiphakamiso sakhe, esivula indlela yokuba kwenziwe izinguquko kuMthethosisekelo zokuthi umhlaba uthathwe ngaphansle kwesinxephezelo.
Lesi siphakamiso siphasiswe ngemuva kokuthi sesekwe ngamaqembu afana ne-ANC, IFP, NFP, UDM, Agang, AIC ne-APC.
Lokhu kusho ukuthi iConstitutional Review Committee, ehlanganiswe ngamalungu ePhalamende, izobuya nempendulo ePhalamende ungakapheli u-Agasti walo nyaka. Uhlelo lwaleli komidi luzobandakanya nokubanjwa kwezigcawu zomphakathi.
OLUNYE UDABA: Ezinoju mayelana nokubuyiswa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo
"Kulesi siphakamiso akukho lapho sithi khona kuzoshaqwa umhlaba wasezindaweni ezisemakhaya noma ezasemadolobheni. Thina sithi makushaqwe umhlaba ngaphandle kwesinxephezelo," kusho uMalema.
"Wonke umhlaba eNingizimu Afrika kumele ushaqwe ngaphandle kwesinxephezelo bese ubuyela ngaphansi kukahulumeni. Uhulumeni kumele kube yiwo ophatha umhlaba," echaza.
"Akukho muntu ozolahlekelwa wumuzi wakhe, iflethi lakhe noma yimboni yakhe. Esikushoyo wukuthi akekho umuntu okumele azishaye isifuba ngokuba nomhlaba," esho.
"Wonke umuntu ozowuthelela umhlaba, lokho kuzoncika ekutheni sithini isivumelwano ngalokho, ngokwemiphumela yokubuyekezwa koMthethosisekelo."